(Dhegayso) Wasaaradda haweenka Puntland oo ka hadashay kiis ka dhacay magaalada Bosaso. | puntlandi.com
(Dhegayso) Wasaaradda haweenka Puntland oo ka hadashay kiis ka dhacay magaalada Bosaso.
Wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda Puntland, Maryan Axmed Cali, ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadashay tacadi magaalada Bosaso loogu geystay gabadh 17 jir ah, kadib markii uu dhaawac ugeystay askari ciidanka katirsan.
Wasiirka haweenka waxay sheegtay inay gabadhaan wasaaraddu kiiskeeda gacan weyn ka geysatay islamarkaana markii xaaladeeda caafimaad wax looga qaban waayay loo diray magaalada Muqdisho. arrinteedana lagu wareejiyay wasaaradda haweenka dowladda federalka Soomaaliya.
“Waxaan idiin sheegaynaa inaan gabadhaas la tacaalnay, isbitaalka geynay, dhaqaatiir uqabanay, markii aan ogaanay in xaalada gabadha aan waxba looga qaban karin Bosaso, ayaan go’aansanay inaan udiyaarino Muqdisho, waana ku guulaysanay, waxaana nagala wareegay wasiir Deeqo.” ayay tidhi wasiirka haweenka Puntland.
Wasiirka haweenka waxay sheegtay inay ciidamada baadi goobayaal ninka falkaan geystay si sharci loo horkeeno. Waxay wasiirku aad u cambaareysay warar been abuur ah oo ay saxaafada Muqdisho tabiyeen oo ku saabsan kiiska arrintaan.